एनआईसी एशियाको डिबेन्चर बाँडफाँड
एनआईसी एशिया बैकले बिक्री खुल्ला गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर बाँडफाँड भएको छ । ९ प्रतिशत ब्याजदर रहेको उक्त डिबेन्चर पुस १३ मा खुला गरिएको छ ।
महिला सहकारी संस्था नाफामा
महिला सहकारी संस्थाको शनिबार बसेको २२ औं साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफा बाट १५ प्रतिशत लाभांस सेयरधनी सदस्यलाई दिने निर्णय गरेको छ । संस्थाले आव २०७३/७४ मा ५४ करोड ६८ लाख ८५ हजार निक्षेप संकलन र ८७ करोड ५३ लाख ४८ हजार कर्जा लगानी गरी सञ्चालन मुनाफा ५ करोड ६६ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
आँबुखैरेनी र हरमटारीमा एनआईसी एशियाका शाखा
एनआईसी एशिया बैंकका २ नयाँ शाखा आँबुखैरेनी गाँउपालिका वडा नं. ३, आँबुखैरेनी र तनहुँ र गोरखा नगरपालिका–६, हरमटारी, गोरखामा शाखा खुलेका छन् । दुवै शाखाको सोमबार एक समारोहका बिच् औपचारिक रुपमा उद्घाटन सम्पन्न भएको छ ।
सिटिजन्स बैैंकको मोबाइल बैैंकिङ स्तरोन्नति
सिटिजन्स बैैंक इन्टरनेसनलले आफ्नो पुरानो मोबाइल बैंकिङ सेवा स्तरोत्रति गरी नयाँ प्रबिधिमा आधारित मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरवात गरेको छ ।
बिओकेद्वारा काठमाडौं क्यापिटलको सेयर खरिद
बैंक अफ काठमाण्डूले काठमाडौं क्यापिटल मार्केटको दुईतिहाई संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ । काठमाडौं क्यापिटल मार्केट घितोपत्रबोर्ड द्वारा लाइसेन्स प्राप्तमर्चेन्ट बैकिङ कम्पनीहो ।
सहकारीलाई १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार डिभिजनलाई
सहकारी ऐन विपरित काम गर्ने सहकारी संघसंस्थालाई १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार डिभिजन सहकारी कार्यालयले पाएको छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ ले जरिवाना गर्न रजिष्टारलाई दिएको अधिकार डिभिजन कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।
सिर्जना फाइनान्स राष्ट्रियस्तरमा जाँदै
सिर्जना फाइनान्सको सत्रौं वार्षिक साधारणसभाले राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स बन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । विराटनगरस्थित उद्योग संगठन मोरङको सभाहलमा शनिबार सम्पन्न भएको साधारणसभाले निक्षेप, कर्जा र मुनाफाको हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृत फाइनान्स कम्पनीहरुमध्ये सिर्जना फाइनान्स लिमिटेड उत्कृष्ट रहेको उदघोष गरेको छ ।
सिन्धुलीमाडी र बेसीसहरमा एनआईसी एशियाका शाखा
एनआईसी एशिया बैंकले सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडी र लमजुङको बेसीसहरमा शाखा खोलेको छ । कमलामाई नगरपालिका–६ सिन्धुलीमाडी र बेसीशहर नगरपालिका–७, लमजुङमा आइतबार आयोजित समारोहमा दुवै शाखाको औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएको छ ।
विराटचोकमा सिभिल बैंकको शाखा
सिभिल बैंकले मोरङको विराटचोकमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको मर्जरबाट प्राप्त भएको शाखासहित इटहरीमा भएको दुई शाखामध्येको एक शाखालाई स्थानान्तरण गरी विराटचोकमा संचालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।
भेरी सहकारीको मुनाफा एक करोड
नेपालगन्ज, २३ पुस (कास)ः भेरी सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेड नेपालगन्जले १ करोड ७ लाख ७८ हजार ५ सय ४१ रुपैया मुनाफा गरेको छ । संस्थाको शनिबार नेपालगन्जमा भएको २२ औ साधारण सभा कार्यक्रममा सो जानकारी दिएको हो ।
बैंकर्स संघमा ढुंगाना
नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट देखिएको बताएका छन् । उनले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह नगर्न बैंकहरूलाई चेतावनीसमेत दिए । ग्लोबल आईएमई बैंकको कमलादीस्थित नयाँ कर्पोरेट उद्घाटनपछि आयोजित समारोहमा गभर्नर नेपाल निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भए ।